Nyocha 3 N'elu | Akụkọ akụrụngwa
Villamandos | | Nyocha, mbadamba
Maka afọ ole na ole ugbu a, ngwaọrụ Ibu Microsoft Ha na-achịkwa iji nweta niche dị mkpa n'ahịa, na-enweghị mbadamba nkume ma ọ bụ laptọọpụ, mana na-egosi na ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ngwakọ nke ngwaọrụ abụọ a na ndụ ha kwa ụbọchị. Na Elu 3 Ọ bụ ngwaọrụ ikpeazụ nke ụlọ ọrụ Redmond kwalitere na ahịa na izu ndị gara aga anyị enweela ohere ịnwale ya nke ọma ma pịgharịa ya ruo n'ókè a na-atụghị anya ya.
Site na izu ndị a nke ule na ibi na Mkpa 3, anyị chọrọ igosi gị nyocha a zuru oke nke ị ga-ahụ ọtụtụ ozi gbasara ngwaọrụ Microsoft a, kamakwa echiche anyị banyere iji Mbekere ọhụrụ a, Kedu ahapụwo uto dị ukwuu n’ọnụ anyị, ọ bụ ezie na dịka o mere na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ezinụlọ dị elu, nwetụrụ nkụda mmụọ na ndakpọ olileanya mgbe ị maara ọnụahịa ya.
Ọ bụrụ na ị na-eche inweta Mkpa 3 ma ọ bụ onye ọ bụla so na Mkpa, anyị nwere ike ịgwa gị ka ị gụọ isiokwu a iji nwee ọ enjoyụ na echiche anyị. Ọ bụrụ n'inweghị uche iji nweta Mkpa, nwee ọ readingụ n'ịgụ ma eleghị anya na njedebe nke isiokwu a, ị ga-agbanwe obi gị na ọchịchọ kachasị gị ịnweta otu n'ime ngwakọ ndị a sitere na ụlọ ọrụ Satya Nadella na-agba.
4 Akụkụ ndị ziri ezi
5 Ndi ozo
6 Echiche nke onwe
9 Uru na ọghọm
Ọzọkwa a haziri nke a n'elu 3 bụ otu n'ime ike ya na ọ na-ọkọnọ enweghị isi mgbanwe tụnyere gara aga na nsụgharị na-ama nwere nnọọ ihe ịga nke ọma ma jiri nlezianya imecha. Anyị nwere ike ịsị na Mbepụ ọhụụ a bụ nke yiri Mbepụ 2 dị na mpụga, ọ bụ ezie n'ime anyị ga-ahụ nnukwu mgbanwe na ndozi nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịghọta ngwa ngwa.
Site na akụkụ nke 267 x 187 x 8,7 millimeters na ịdị arọ nke gram 622, anyị na-ahụ ngwaọrụ anyị nwere ike ibufe ebe ọ bụla n'ụzọ dị mfe na enweghị ọtụtụ nsogbu. Maka onye ọ bụla nwere mmasị ịzụ ahịa, Mbepụ 3 a dị ntakịrị karịa ma dị mfe karịa Mpụta 2 gara aga..
Iji mechaa ngalaba a, anyị nwere ike ikwu na ihe eji eme ihe maka mpụta nke Mpụta 3 a na-enye ya ụdị adịchaghị mma, nke ihe ọ bụla onye ọrụ ọ bụla masịrị. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị agbakwunye kiiboodu anụ ahụ, nke na-arụ ọrụ dị ka ihe mkpuchi, ọhụụ nke ngwaọrụ ahụ na-akawanye mma nke ukwuu.
Tupu anyị abanye n'ime nke ihu 3 a, anyị ga-eme nyocha ngwa ngwa banyere ya isi atụmatụ na nkọwa;
Ihuenyo: 10 sentimita asatọ na 1920 × 1280 mkpebi, 3: 2 usoro iji ruo 256 ọkwa nke nrụgide maka pen na nchebe maka nkwụ.
Nhazi: Intel Atọm X7 Cherrytrail
RAM: Nsụgharị 2 na 4GB
Nchekwa: 64 na 128GB SSD, ụdị 32GB maka agụmakwụkwọ.
Batrị: ruo 10 awa nke vidiyo egwu.
Njikọ: Mini DisplayPort, USB, WiFi, nhọrọ LTE.
OS.: Windows 8.1 upgradeable na Windows 10 na 32/64 bit ọkwọ ụgbọala
N'ime ebe a, anyị na-ahụ a Intel processor, kpọmkwem Atọm X7 nke nwere isi anọ ma na-arụ ọrụ na ọsọ nke 1,6 GHz. Otu n'ime oke mmasi nke ihe nhazi a bụ na ọ chọghị ventilashị nke ụdị ọ bụla, nke na-ezere ndị na-akwado ya ma yabụ mkpọtụ na ahụ erughị ala ha nwere.
N'ịbanye n'okwu ahụ, anyị nwere ike ikwu maka ihe nhazi a, na ọ bụghị ụbụrụ dị njọ maka 3 Nke a, mana na ọ gaghị abụ ihe ịtụnanya. Ma ọ bụ na ịrụ ọrụ ọ bụla kwa ụbọchị ọ karịrị akarị, na-enye anyị ezigbo arụmọrụ dị mma, agbanyeghị dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị enwe ike ịnye anyị ọrụ pụtara ìhè.
Ọrụ a, ikekwe dị ala karịa ka a tụrụ anya ya, na-eme ihe atụ nke ahụ ọ gaghị ekwe omume ịnụ ụtọ egwuregwu kachasị ọhụrụ na ahịa na Elu a ọ dịghịkwa nke ọ bụla n'ime ha nwere afọ ndụ. Maka ihe a niile na dịka anyị maara na ọtụtụ chọrọ ụdị ụdị a ka ha nwee ike igwu ụfọdụ egwuregwu kacha mma n'ahịa, Mkpa 3 abụghị ngwaọrụ anyị nwere ike iji egwu.
N'ezie, anyị agaghị enwe ike iji, ọbụlagodi n'ụzọ nkịtị na nke dị mma, ụfọdụ ngwa ndị na-achọ ihe kachasị na ahịa, dị ka Photoshop, nke were ihe karịrị 50 nkeji iji wụnye na Mkpa.
Dị ka ọ dị na mbụ, ngwaọrụ a sitere na ezinụlọ dị n'elu ala na-enye anyị ohere iji nweta ọtụtụ ngwa na-adọrọ mmasị. Ihe kachasị mkpa nke ngwa ndị a bụ keyboard ya, nke dị mkpa iji nwee ike ịba nnukwu uru site na nke a 3. Na mgbakwunye anyị ga-ahụkwa mkpịsị akụ, nke dabere na ojiji anyị ga-enye ngwaọrụ a nwere ike nwekwuo ike ma ọ bụ obere ojiji.
N'ọnọdụ anyị keyboard ahụ dị anyị ezigbo mkpa Ma ọ bụ na n'oge edere nyocha a, nke ejiri Surface 3 rụọ ya, ọ nweghị ụzọ ọzọ a ga-esi ede ederede karịa na keyboard nkịtị nke enwere ike ịgbakwunye na Mkpa ahụ maka ekele ya.
N'ezie, a na-azụta keyboard a n'adabereghị na ngwaọrụ ọ bụla, nke na-eme ka ọnụahịa ikpeazụ nke ngwaọrụ ahụ dịkwuo ukwuu.
Ugbu a, anyị ga-enyocha akụkụ kachasị mma na nke adịghị mma anyị chọtara na Mbepụ ọhụrụ 3 a:
Akụkụ ndị ziri ezi
Otu n'ime akụkụ kachasị masị anyị banyere Mbepụ 3 a mgbe izu ole na ole jiri ya bụ ịdị mfe nke iga na-eji ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla. Tụkwasị na nke ahụ, ahụmịhe nke ngwa ngwa nke ngwa ahụ, dị ka kiiboodu na stylus, na-adọrọ mmasị ma na-enye anyị azịza maka nsogbu ụfọdụ.
N'ezie, ihuenyo ahụ na-enye anyị nnukwu ahụmịhe na ike ya na-atọ ụtọ iji mepụta ọrụ ọ bụla, agbanyeghị, enwere ike m na-atụ anya ihe karịa na nke ahụ bụ na o mechuru m ihu ntakịrị na anyị enweghị ike iji ụfọdụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu na nke a. ngwaọrụ.
Ọ ga-amasị m ịhapụ akụkụ a oghere n'ihi na echere m na Mbelata 3 a bụ ngwaọrụ pụtara ìhè n'ozuzu ya, mana echere m na ọ nwere akụkụ ụfọdụ na-adịghị mma nke anyị na-enweghị ike n'okpuru ọnọdụ ọ bụla ileghara anya.
Na nke mbụ, ọ bụ ezie na anyị na-ekwu maka ngwaọrụ ngwakọ n'etiti mbadamba na laptọọpụ, echere m na ọ dara ọkara ọkara na-enweghị nke ọ bụla n'ime ha abụọ, nke oge ụfọdụ bụ nsogbu. O doro anya na ọnụahịa ya bụ akụkụ ọzọ dị ukwuu.
Iji mechie ngalaba a, ị nweghị ike ịkọwa nke ahụ ọ bụ n'ezie ngwaọrụ siri ike iji rụọ ọrụ n'oge ụfọdụ Ma ọ bụ na mgbe ijikọ kiiboodu na mbadamba nkume n'ụzọ dịtụ iche, ọ naghị enye ngwaọrụ ahụ nrụgide nke laptọọpụ. Nke a na - eme ka o sie ike iji ya na sofa n'ụlọ ma ọ bụ n'ụgbọ njem ọha na eze dị ka à ga - asị na anyị nwere ike iji laptọọpụ enweghị nnukwu nsogbu.
Ebe ọ bụ na Microsoft malitere mbụ Mkpa, ọ bụ a ngwaọrụ na adawo na ịhụnanya m n'ụzọ dị mkpa, ọ bụ ezie na m na mgbe okokụre ịzụ ebe m na-agbalị ọ bụla nke na nsụgharị na-ruru ahịa, ọ hapụrụ m na a ekpomeekpo iju ọnụ.
Nke a bụ na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na anyị na-eche ihu ngwaọrụ pụtara ìhè n'ihe gbasara ịmebe na ịrụ ọrụ enwere ihe ndị anaghị eme ka m kwenye ma ọlị nke na-eme ka m kpebie ịzụta mbadamba ma ọ bụ laptọọpụ n'ihu Microsoft Surface. Eleghi anya, m nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo onye ọrụ nke Mkpa, mana enwere m obi ebere maka ya n'ihi na echere m na m ga-enwe mmasị ịnweta otu ma jiri ya mee ihe n'ezie.
Hapụ ahụmahụ m na echiche m, Ekwere m na anyị na-eche ihu ngwaọrụ pụtara ìhè n'akụkụ niile na nke ahụ maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ ngwaọrụ zuru oke maka ụbọchị ha taa.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ chọrọ ngwaọrụ n'etiti etiti mbadamba na laptọọpụ, echere m na Microsoft Surface 3 a nwere ike ịbụ ezigbo mma maka gị.
Microsoft Surface 3 adịworị adị na ahịa maka izu ole na ole na ọnụahịa na ụdị nke kachasị nke 599 euro. N'ezie, na ọnụahịa a anyị ga-agbakwunye kiiboodu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu, nke nwere ọnụahịa nke euro 149 na pen pen nke nwere ọnụahịa nke 90 euro. Site na nke a, ọnụahịa ahụ ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 49,99, nke na-abụghị ọnụahịa dị ala.
Site na ebe a, anyị nwekwara ike nweta nsụgharị ndị ọzọ dị ike nke Mkpa 3 nke ga-enwe ọnụahịa dị elu karị. Ọ dịkwa mkpa ka ị buru n'uche na ịzụta ngwaọrụ a na United States ga-adị ọnụ ala karịa ịme ya na Europe, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ohere ịzụrụ n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ahụ, egbula oge.
Ọ bụrụ na ịchọghị nsogbu ma chọọ ịzụta ngwaọrụ na Spain ma ọ bụ obodo ọ bụla ọzọ, ị nwere ike ime ya site na ndị a amazon njikọ.
Kedu ihe ị chere gbasara Mkpa 3 mgbe ị gụsịrị nyocha anyị zuru ezu?.
Enwe ike iburu ngwaọrụ a n'ụzọ dị mma ma na-apị ya n'ebe ọ bụla
Sọftụwia mara nke ọma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile
Ahịa nke ngwaọrụ na ngwa
Mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri ike iji ya n'ihi njikọ dị n'etiti keyboard na Mkpa nke na-anaghị ekwe ka anyị, dịka ọmụmaatụ, iji ya na sofa dị ka laptọọpụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Anyị nwalere Mkpa 3, ngwaọrụ pụtara ìhè na mbinye aka Microsoft
Ugbu a, iPad «Pro» pụtara, ha deign ka ha nwalee elu mmmm, kedu igwe nke ziri ezi?
Loot Crate mechara rute Spain